Inona ny hafanana manga? Lazainay aminao ny zava-drehetra | Green Renewable
Inona ny hafanana manga?
Portillo Alemanina | | Toekarena an-trano
Mety efa naheno momba ny fisian'ny hafanana manga. ny radiatera hafanana manga ary mampitombo ny fahombiazan'ny hafanana miaraka amin'izy ireo. Saingy, hatraiza ny fahafantaranao an'io karazana hafanana io ary fantatrao raha tena mahomby izy io? Angamba tetikady marketing hafa an'ny orinasa izay milalao amin'ny filantsika mba hahatonga antsika hividy vokatra vaovao sy "manavao" kokoa.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny atao hoe hafanana manga, ny fomba fiasan'izy io ary raha tena mahomby kokoa noho ny hafa izy. Te hahafantatra bebe kokoa momba izany ve ianao?
1 Inona ny hafanana manga?
2 Tombony azo amin'ny fanafanana
3 Tombony amin'ny fampiasana azy
4 Fanjifana radiatera hafanana manga
5 Mendrika hapetraka ao an-trano ve izy ireo?
Ny angovo hafanana na manga dia teny izay mbola tsy mazava tanteraka. Betsaka ny olona manontany ny momba an'io satria mihabe ny fisalasalana. Ity teny ity dia avy amin'ny radiatoran'ny taranaka farany. Izy ireo dia fivoaran'ny radiator lasantsy elektrika mahazatra satria mampiasa resistor koa izy ireo amin'ny hafanana. Raha ny tena manokana dia hafanana manga no ampiasain'izy ireo satria izy ireo dia mampiasa akora izay tsiranoka famindrana hafanana antsoina hoe "Masoandro Manga".
Izany no nahatonga ilay anarana avy amin'ny hafanana sy ny taratra radiatera vaovao. Raha te hahalala ny fototr'io hafanana manga io dia mila mandeha any amin'ny 1841 ianao Hitan'i James Prescott ny vokatr'i Joule. Ity vokatra ity no manampy amin'ny famaritana raha mandeha amin'ny alàlan'ny conducteur ny onja elektrika. Fantatra izy io satria ny ampahany amin'ny angovo kinetika ao amin'ny elektrôna misy ny herinaratra, rehefa mandalo ny tsiranoka, dia miova ho hafanana. Ity no fitsipiky ny radiator hafanana manga.
Amin'ny alàlan'ny herinaratra mandalo ny tsiranoka famindrana hafanana dia azo hafanaina mba hanomezana fitomboan'ny mari-pana ao amin'ilay efitrano misy azy.
Tombony azo amin'ny fanafanana
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'io karazan-hafanana io, dia handinika ny tombony sy ny fatiantoka isika amin'ny fampiasana azy.
Ny tombony lehibe ananana dia izany afaka mampiasa probe hanarahana maso ny mari-pana. Amin'izany dia lasa marina kokoa izy ireo ary manakana ny angovo tsy ho very maina. Manoloana ny fitehirizana ny volavolan-dalàna momba ny herinaratra dia lafiny tsara tokony hikajiana izany.
Amin'ny ankapobeny dia mitovy amin'ny radiator mahazatra izy ireo. Saingy tsy mitovy izy ireo, amin'ny lafiny iray, ny ranoka manolo ny menaky ny fiainana rehetra dia mivezivezy ao anatiny, ary etsy an-danin'izany, dia manana timer izy ireo. Io indray dia singa iray hafa tokony hikajiana ny tahiry. Azontsika atao ny mamolavola azy io raha mbola tadiavintsika fa tsy mandany angovo na vola. Ny programmer koa dia mifehy ny mari-pana.
Ny rivotra izay avoakan'ny fitaovana avy any ambony dia zaraina manerana ny efitrano. Amin'ity fomba ity no ahafahanao manafana azy amin'ny fomba mahomby sy haingana kokoa.
Tsy mamokatra entona, fofona na residue izy ireo.
Ny vidin'ny fametrahana dia ambany lavitra noho ny an'ny paompy hafanana. Manana rafitra tsotra amin'ny rindrina izy ireo.
Lafiny iray hafa misongadina, tsy dia manandanja loatra, ny firafitra manintona kokoa noho ny mahazatra. Io lafiny io dia aorinan'ny hatsarana rehetra, fa tsara kokoa ny mandray azy raha toa ka mandray anjara amin'ny famolavolana ny efitrano fandraisam-bahininao izany.
Tombony amin'ny fampiasana azy
Toy ny manana tombony ny radiatera hafanana manga, dia misy fatiantoka ihany koa rehefa mampiasa azy ireo.
Amin'ny fotoana sasany, mahay mandany herinaratra bebe kokoa, noho izany izy ireo dia mety ho tsy dia mahomby sy lafo kokoa noho ny rafitra fanamafisana mahazatra.
Azo lazaina fa ny fampiasana hafanana manga dia mahaliana kokoa ao an-trano izay miorina amin'ny toerana misy toetr'andro mafana kokoa ary tsy mila ampiasaina matetika. Amin'ny ankapobeny, izy io dia ampiasaina amin'ny toe-javatra izay tsy mila ampiasaina ela loatra. Noho izany, mila mandahatra azy fotsiny isika, manafana haingana ny efitrano ary mahazo fampiononana nefa tsy mandany angovo firy.
Fanjifana radiatera hafanana manga
Raha te-hanao referansa ny fanjifana raha oharina amin'ny radiatera mahazatra dia tokony ho hitanao ny zava-bitany. Ny fahombiazan'ny fitaovana dia ny fifandraisana misy eo amin'ny hafanana ateraky ny radiatera sy ny angovo laniny. Noho izany, ny fahombiazan'ny radiatera ireo 100% io, raha ampitahaina amin'ny paompy hafanana 360%. Izany dia mahatonga antsika hahita fa lafo kokoa ny famokarana angovo.
Raha ny rafitra tianao hampiasaina dia ny famokarana hafanana amin'ny alàlan'ny herinaratra, satria tsy manana toeram-pivoahana entona ny trano, satria tsy misy toerana hametrahana tanky diesel, sns. Tokony hoheverinao ny safidinao amin'ny fametrahana paompy hafanana na fanafanana hafanana manga.
Mendrika hapetraka ao an-trano ve izy ireo?
Rehefa avy namaky ny zava-drehetra momba ny hafanana manga, avy amin'ny inona ny fihinanana azy, azo antoka fa mipetraka ny fanontaniana raha mendrika ny hametrahana azy ao an-tranonao izany ary raha toa ka ho lafo be izany. Eny, andao handeha amin'ny ampahany. Voalohany, tokony ho fantatrao ny paikadim-barotra iray manontolo misy ny hafanana manga any aoriana. Angamba, raha tonga any aminay any an-trano ny dokambarotra mivarotra radiatera iraisana, dia hariantsika tsy ho ela.
Na izany aza, raha manomboka miresaka aminay momba ny hafanana manga izy ireo, dia ho liana izahay farafaharatsiny. Tokony hanaiky ianao fa ity zavatra mafana manga ity dia toa tsara be ary toa manonona revolisiona teknolojia iray manontolo. Tsy toa izao. Taratra mahazatra fotsiny io izay, fa tsy mampiasa menaka, dia mampiasa karazana tsiranoka hafa. Raha vantany vao mandalo azy ny herinaratra dia miakatra ny hafanana ary miparitaka eraky ny efitrano ny rivotra.
Rahoviana ny radiator hafanana manga mety amintsika ary rahoviana? Tsotra be izy io. Amin'ireny toerana ireny na noho ny toetrandro na ny fomba fiainam-pianakaviana dia tsy mila ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra na manafana efitrano maro izy io. Tsy maintsy araraotinao ireo radiatera ireo amin'ny fampiasana manokana ary ampiasao ny hafainganam-pandehan'izy ireo hanafanana efitrano mahazatra. Raha mila hafanana maharitra kokoa isika, andramo ireo rafitra fanafanana hafa toy ny paompy hafanana na a thermiat wifi.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia nianatra momba ireo radiatera ireo ianao ary tsy voafitaky ny tetikady marketing.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Inona ny hafanana manga?
Charger an'ny masoandro
Inona ny angovo nokleary? Ny tokony ho fantatrao